CBZ Holdings, Zimbabwe’s largest local financial group on Thursday reported a 32 percent drop in profit after tax to $23,7 million in the full year to December from $35,2 million last year and its Treasury Bills holdings doubled to $766 million. Presenting company results on Thursday, finance director Colin Chimutsa said non interest inco…
More than a tenth of Zimbabwe’s current maize crop is under threat from a fall armyworm infestation that has affected at least seven countries in the southern African region, the United Nations’ Food and Agricultural Organisation has said. Zimbabwe, a regional bread basket turned perennial food importer, has planted 1.2 million hectares o…
NEW YORK — SAP SE (NYSE: SAP) today introduced the latest advances to SAP S/4HANA Cloud and shared its innovation road map for the industry’s next-generation, leading-edge cloud enterprise resource planning (ERP) suite. With a new architecture of in-memory technology in combination with contextual analytics, digital assistant capabilities…
Standard Chartered Bank’s Zimbabwean unit on Tuesday cancelled the automatic use of its VISA cards internationally in response to a deepening shortage of US dollar notes in the country. “We regret to advise that we have cancelled the automatic use of your VISA debit card outside Zimbabwe with immediate effect,” said the bank in a statemen…